Sigstr: Abuur, Dhig, oo Cabir Ololaha Saxiixa Emailkaaga | Martech Zone
Sigstr: Abuur, Dhig, oo Cabir Ololayaasha Saxiixa Emailkaaga
Isniin, Disembar 4, 2017 Isniin, Disembar 11, 2017 Douglas Karr
Email kasta oo laga soo diro sanduuqaaga waa fursad suuqgeyn ah. Intii aan u dirnay joornaalkeenna tan macaamiisha ah, waxaan sidoo kale u dirnaa 20,000 oo emayl oo kale xiriir maalinle ah oo dhex maraya shaqaalaha, macaamiisha, rajooyinka, iyo xirfadlayaasha xiriirka dadweynaha. Weydiinta qof walba inuu ku daro banner si kor loogu qaado warqad cad ama websaydhka soo socda sida caadiga ah wuxuu ku gudbaa guul yar. Dadka intooda badani way iska indha tiraan codsiga, kuwa kale waxay qashqashaan iskuxirka, dadka runti riixi kara wicitaanka-ficilka waligood mahelaan.
Haddii aadan rumaysan in saxeexyada iimaylku ay muhiim yihiin, ka eeg falanqaynta kulaylka isha isha Indhoole.
Tani waa halkaa Sigstr soo galo! Sigstr waxay bixisaa maareynta dhexe ee ololeyaasha saxiixa saxiixa halkaasoo dhammaan isticmaaleyaasha isla markiiba la cusbooneysiin karo. Ololayaasha waxaa lagu dhisi karaa adoo sawir soo rogaya ama qoraal galaya. Shaqaalahaagu uma baahna inay wax ka beddelaan hal koodh oo koodh ah - kooxdaada suuqgeynta ayaa isweydaarsan karta ololeyaal markasta oo ay doonaan.
Sigstr xitaa waxay tarjumaysaa noocyada ugu habboon ee ololaha moobiilka iyo kombuyuutarka oo leh horudhac labadaba. Dabcan, Sigstr wuxuu bixiyaa mid fudud Analytics si loo muujiyo tirada jeer ee ololaha la arkay iyo sidoo kale qasabadaha ololaha ama shaqaale!
Sigstr sidoo kale waxay u oggolaaneysaa kooxaha in la abuuro. Tani waa muuqaal aad u wanaagsan tan iyo markii aad koox u yeelan karto kooxdaada taageerada oo loo xilsaaray olole kor u qaadaya wax soo saarka cusub, halka kooxdaada shaqaalaysiinta loo qoondeeyay olole Xirfadeed, halka kooxdaada iibka ay ku dhiirrigelinayaan warqad cad oo ku saabsan Soo noqoshada ku saabsan Maalgelinta xalkaaga!
Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha in lagu daro kooxaha ka dibna koox kasta waxaa lagu dari karaa ololeyaal gaar ah! Aad baan ugu farxay Sigstr inaan isla markiiba saxiixnay - waxayna ahayd wax cajiib ah inaan u adeegsanno oo maamulno dhammaan shaqaalaheenna.
Isdhexgalka Saxeexa Emailka Sigstr
Dhigista Sigstr waa iska fudud tahay shirkad kasta tan iyo markii ay hadda ku dhexjiraan Tilmaamaha Firfircoon, Muuqaalka, Isdhaafsiga, Xafiiska 365, Google Suite, Gmail iyo Apple Mail.
Act-On - Kordhi dadaalladaada suuq-geynta ee ku dhex jira Act-On adoo ku lifaaqaya saxiixa Sigstr iyo u ololeynta isgaarsiintaada email-ka ah ee Act-On.
Hubspot - Sigstr sidoo kale waxay leedahay is dhexgal Hubspot meesha aad ka waafajin karto mid kasta Hubspot Liiska Smart-ka oo ku meelee olole gaar ah oo loo yaqaan 'Sigstr ABM', ka eeg dhacdooyinka waqtiga Hubspot markay gujinayaan, auto-abuur Hubspot xiriirada ku saleysan cidda ay email u soo diraan, oo ku dabakh isdhexgalka saxiixa iimaylka firfircoonida Hubspot Qulqulka shaqada!
Suuqa - Ku hagaaji suuq-geynta saxeexyadaada liistooyinka 'Marketo Smart Lists' iyo Bogagga Degitaanka. Waxaad sidoo kale la midoobi kartaa saxiixyada sheybaarada emailka Marketo.
Salesforce - Ku waafaji suuq-geyntaada saxiixa ololaha iyo warbixinnada Salesforce. Waxaad sidoo kale la midoobi kartaa saxiixyada sheybaarada VisualForce.
SalesLoft - Waxay ku lifaaqeysaa saxiixa Sigstr iyo olole xiriiriyahaaga emailka ah ee Cadence
Pardot - Isku waafaji suuq-geyntaada saxiixa ololaha iyo warbixinnada. Waxaad sidoo kale la midoobi kartaa saxiixyada sheybaarada emailka Pardot.
Codso Sigstr Demo
Tags: Act-Onfalsaxiixyada emailka actonxayiraadololayaal emailsaxiixa emailkasaxeexyada emaylkaraadinta indhahakhariidadahubspotsaxeexyada hubspot emailsuuqosaxeexyada suuqyada suuqacafissaamax saxiixyada emaylkasaxiixyada iimaylka iibkasaxiixasigstr
6 Habdhaqanka Ugu Wanaagsan Ee Ay Tahay In Aad Raacdo Markii Aad Dhiseysid Bog Aan Ka Bixin